Ity no smartphone finday 5G voalohany | Androidsis
Ny smartphone 5G voalohany eran-tany dia toa tonga aloha kokoa noho ny nandrasana, raha ny pitsopitsony sy ny sary nipoitra tamin'ny internet.
Orinasa lehibe eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra dia manambola dolara an-tapitrisany maro mba hampiroboroboana ny sehatry ny fifandraisana 5G, izay fenitra fampifandraisana manaraka izay ho lasa malaza ao anatin'ny taona maromaro.
Nokia sy Qualcomm no mitarika ny hazakazaka fifandraisana 5G. Raha ny tena izy, Qualcomm aza dia efa naneho tamin'ny fiandohan'ity volana ity tambajotra 5G misy modem x50.
Anisan'ireo fandrosoana rehetra ireo, ny mpampiasa Twitter Sherif Hanna dia namoaka ny sarin'i smartphone iray izay milaza ho finday 5G voalohany manerantany. Hanna dia miasa ao amin'ny Qualcomm, toerana iasany amin'ny maha Marketing Manager an'ny modem LTE sy 5G NR.
Tao amin'ny hafany, namoaka sarin'ny finday avo lenta ilay mpampiasa, miaraka amin'ilay hafatra hoe "Sarotra inoana ny fananako finday 5G voalohany manerantany an-tànako."
Sarotra inoana fa eo an-tanako ny smartphone 5G voalohany! ? pic.twitter.com/b180MawEyT
- Sherif Hanna? (@sherifhanna) Oktobra 25, 2017
Ny finday smartphone hita amin'ny sary dia toa misy rafitra fakan-tsary roa ao aoriana, fa koa rafitra LED roa. Na dia mifanaraka marindrano aza ireo fakantsary dia apetraka mitsangana ny jiro. Ary eo ambadiky ny finday dia hitantsika ny sary famantarana Qualcomm Snapdragon.
Raha ny filazan'ny tovolahy ao amin'ny Digit, ny finday avo lenta amin'ny sary dia Famolavolana referansa mmWave 5G voalohany an'ny Qualcomm. Ary koa, tsy vokatra farany io.
Na eo aza izany prototype miasa tsotra, toa manakaiky ny faran'ny fotoana fanombohana ofisialy ny teknolojia 5G isika. Ny mpanamboatra rehetra dia manao ezaka bebe kokoa mba hanafainganana ny fahatongavan'io fotoana io.
Raha nilaza isika tamin'ny voalohany fa amin'ny taona 2020 na any aoriana aza ho tonga ireo fitaovana 5G voalohany, dia misy ny vintana mety hijerena ny telefaona finday 5G voalohany sy tambajotra miasa nanomboka ny taona 2019, farafaharatsiny any amin'ny firenena sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ity no finday avo lenta 5G voalohany manerantany
Ny fampiharana Android 50 napetraka indrindra araka ny filazan'i Avast